कम्युनिष्ट गठबन्धनसँग आत्तिएका छैनौं
डिग बहादुर लिम्बु, उमेदवार, नेपाली कांग्रेस, मोरङ
२०७४ कार्तिक २६ आइतबार १०:१२:००
२०७० सालमा भएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा मोरङ ९ बाट डिग बहादुर लिम्बुले विजयी हासिल गरे ।
कांग्रेसको उद्गम जिल्ला भनेर चिनिने मोरङबाट उनी विजयी भएका हुन् । मंसिर २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पनि मोरङ १ बाट उनी चुनावी मैदानमा होमिएका छन् ।
एमालेका घनश्याम खतीवडासँग चुनावी मैदानमा रहेका लिम्बुले कम्युनिष्ट गठबन्धनसँग आफूहरु नआत्तिएको दाबी गर्छन् ।
प्रस्तुत छ, लिम्बुसँग बाह्रखरीले गरेको संक्षिप्त कुराकानीः
मोरङ १ बाट उमेदवार बन्नुभएको छ । अहिलेसम्मको चुनावी माहोल कस्तो बनेको छ ?
कांग्रेसले ०७० सालमा त्यहाँ विजयी हासिल गरेको हो । यसपटक पनि मोरङबाट उमेदवार बनेको छु । कम्युनिष्ट गठबन्धनको कुरा आएपछि केही विषयमा विचार पुर्याउनुपर्ने अवस्था देखिएको छ । त्यही रणनीतिअनुसार हामी अघि बढेका छौं । जिल्लाभरमा कांग्रेसको पोजिसन राम्रो छ ।
मोरङले कांग्रेसको पुस्ता पुस्तालाई विजयी बनाएको छ । तर पनि त्यहाँको विकास भनेजसरी अघि बढ्न सकेन भन्छन्, अब पनि कांग्रेसलाई किन भोट दिने ?
विराटनगरमा विकास नै भएको छैन भन्न मिल्दैन । कांग्रेस र देशले नै मोरङलाई महत्वपूर्ण रुपमा लिन्छन् ।
त्यहाँ राजमार्ग बनाउने काम भैरहेको छ । काम गर्न नखोजेको होइन । राजनीतिक अस्थिरताका कारणले गर्दा भनेजति अवश्य गर्न नसकिएको हो । ६, ६ महिनामा सरकार परिवर्तन भएका छन् । यसले गर्दा पनि कांग्रेसले भनेजति विकास गर्न नसकेको हो ।
त्यसको दोषी कांग्रेस पनि होइन र ?
कांग्रेस यो मुलुकको जेठो राजनीतिक दल भएकाले नलिने भन्ने कुरा हुँदैन । मुलुकको राजनीतिक अस्थिरताका कारणले चाहेजति काम हुन सकेको छैन ।
सुधार भएकै छैन भन्न मिल्दैन तर राजनीतिक अस्थिरताका कारणले नभएको भनेर जनताले पनि स्वीकार गरेका छन् ।
स्थानीय तहको निर्वाचन हेर्ने हो भने पनि विराटनगरमा राम्रो देखिएको छ । जनताले त्यो कुराको बोध गरिसकेका छन् । जिल्लामा हामीले रंगशाला बनाउने, रिङरोड बनाउने, मेडिकल कलेजको स्थापना गरेर अघि बढ्ने तयारी गरेका छौं ।
विराटनगरलाई १ नम्बर प्रदेशको राजधानी बनाउने र शहरलाई कालो ताररहित बनाउनुपर्छ भनेर लागिपरेका छौं । विशेष कार्यक्रम लिएर जाने भनेर तयारी पनि गरेका छौं । छोटो समयमा विकास पनि भएको छ ।
तपाईँ ४ वर्षसम्म प्रतिनिधि भएर के काम गर्नुभयो त्यहाँका जनताका लागि ?
व्यक्तिगत रुपमा केही गरिएन होला । तर समग्रमा विकासका काममा आमुल परिवर्तन भएको छ । विभिन्न बाटोघाटो, ढल निकास, शिक्षा, स्वास्थ्यका क्षेत्रमा प्रशस्तै काम गरेको छु ।
कम्युनिष्ट गठबन्धनले तपाइँलाई अफ्ठेरो परेको छैन ?
म त्यति धेरै आत्तिएको छैन । कम्युनिष्ट गठबन्धनले साम्यवाद लक्ष्य भनेर हिँडेका छन् । संसारमा असफल भएको व्यवस्था नेपालमा ब्युँताउन खोजेका छन् । त्यो कुनै हालतमा सम्भव छैन ।
जनताले मत दिए स्वीकार गर्नुपरेन त ?
जनतालाई मत दिन्छन् भन्ने लाग्दैन । जनताले लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यता न्युनिकरण गर्न भोट दिन्छन् भन्ने लाग्दैन । जनताको बीचमा हामी सधैं छौं केही कमीकमजोरी भए हामी सच्याउन तयार छौं । कांग्रेसको उद्गम स्थान मोरङवासीले अहिले पनि पूर्ण साथ दिन्छन् भन्ने मलाई विश्वास छ ।